Ahoana no Hataoko Rehefa Izaho no Diso? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goun Grika Groenlandey Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kamba Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Nyungwe Nzema Népali Okpé Ossète Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tetun Dili Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Twi Télougou Urhobo Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Nahoana ianao no tokony hiaiky hoe diso?
Diniho ange izay nanjo an’i Karina e! Eritrereto hoe ianao no teo amin’ny toerany. Inona no mety ho nataonao?
Hoy i Karina: “Nitondra aotomobilina mafy be aho indray mandeha, dia tratran’ny polisy. Nasainy nandoa lamandy aho. Saika torana aho tamin’izay! Notantaraiko an’ny neninay ilay izy dia hozy hoe mila miteny amin’i Dada koa aho. Izay mihitsy anefa ilay tsy tiako.”
Safidy A: Tsy miteniteny sady manantena hoe tsy ho tratran’i Dada.
Safidy B: Hitsotra amin’i Dada an’izay rehetra nitranga.
Angamba ianao te hanao an’ilay Safidy A, sady ny neninao koa mety hieritreritra hoe efa nifona tany amin’ny dadanao ianao. Tsara anefa raha tsorinao ny marina, na inona na inona tsy nety nataonao. Nahoana?
1. Satria tsara ny milaza ny marina. Mampirisika ny Kristianina mba “hanao ny marina amin’ny zava-drehetra” mantsy ny Baiboly.—Hebreo 13:18.
“Niezaka be aho mba hilaza ny marina foana, ka tonga dia hiaiky rehefa diso, ary ho vonona hizaka ny vokatry ny ataoko.”​—Alexis.
2. Satria mora amin’ny olona ny mamela ny fahadisoanao rehefa mitsotra ianao. Hoy ny Baiboly: “Izay nandika lalàna ka manarontsarona ny nataony dia tsy hahomby, fa izay miaiky heloka sy miala amin’izany kosa no hamindrana fo.”—Ohabolana 28:13.
“Ilana herim-po aloha ilay izy e, nefa lasa atokisan’ny olona ianao avy eo. Fantany mantsy fa tsy mandainga ianao. Na dia tsy nety aza ny nataonao, dia lasa misy vokany tsara ilay izy rehefa miaiky ianao fa diso.”​—Richard.
3. Satria mampifaly an’i Jehovah izany ary izay no tena zava-dehibe. Izao no lazain’ny Baiboly: “Maharikoriko an’i Jehovah ny olona fetsifetsy, fa ny olo-mahitsy kosa no manana fifandraisana akaiky aminy.”—Ohabolana 3:32.
“Nanao fahadisoana be aho indray mandeha. Tonga saina aho tamin’izay hoe tokony hitsotra ny marina aho fa tsy hanafina. Fantatro fa tsy hotahin’i Jehovah mihitsy aho raha tsy manao an’izay.”​—Rachel.
Ary inona kosa no nataon’i Karina? Nafeniny an’ny dadany ilay izy. Tratra ihany anefa izy tamin’ny farany! Hoy i Karina: “Nijery ny faktioranay i Dada herintaona tatỳ aoriana, ka hitany tao hoe nisy lamandy naloa tamin’ny anarako. Bedy be aho tamin’izay! Na i Neny aza tezitra hoe tsy nanaraka ny teniny aho.”
Lesona: Hoy i Karina: “Vao mainka midi-kizo ianao raha manafina ny fahadisoanao. Mbola hipoitra mantsy ilay izy, dia amin’izay vao hovidinao lafo!”
Samy manao diso isika rehetra. (Romanina 3:23; 1 Jaona 1:8) Manetry tena sy matotra anefa ny olona iray raha tonga dia miaiky ny fahadisoany.
Ataovy anatra ho amin’ny sisa iny avy eo, ary ny hoavy indray eritreretina. Tanora maro anefa no mbola mieritreritra foana an’izay tsy nety nataony. Hoy, ohatra, i Priscilla: “Kivy be foana aho rehefa avy nanao diso. Tsy zakako mihitsy ilay izy, satria hoatran’ny tsisy dikany izany no fiheverako ny tenako. Malahelo be aho, sady mieritreritra hoe inona intsony moa ny amiko!”
Hoatr’izany koa ve no tsapanao indraindray? Ianao ve anefa izao raha mitondra aotomobilina, dia hifantoka be amin’ilay fitaratra fijerena ny any aoriana? Aza mifantoka be amin’izay tsy nety nataonao àry. Hahatsiaro tena ho tsy misy dikany fotsiny ianao raha izany, sady lasa tsy mahavita miatrika ny hoavy.
Maninona raha mba mianatra mandanjalanja?
“Tsara ny mieritreritra an’izay diso nataonao, dia mandray lesona amin’ilay izy, amin’izay ianao tsy mamerina intsony. Aza eritreretina be foana anefa ilay izy, sao ho kivy eo fotsiny ianao.”​—Elliot.
“Rehefa diso aho, dia ataoko anatra ho amin’ny sisa ilay izy. Eritreretiko tsara fotsiny izay hatao amin’ny manaraka rehefa misy hoatran’iny indray. Sady ilaina koa izany raha te hihamatotra.”​—Vera.
“Misy olona kivy be rehefa manao fahadisoana, fa misy indray tsy mivaky loha mihitsy. Samy tsy mety anefa ireo. Tsara kosa ny mandray lesona amin’ilay izy dia tsy mamerina intsony, nefa tsy hoe mifantoka be amin’iny foana.”​—Connor.
“Raha mianjera izao ny mpihazakazaka, dia miezaka mitsangana haingana izy ary lasa indray, fa tsy hoe be hambom-po dia tsy manohy intsony. Izany koa no tokony hataonao rehefa diso ianao. Mandraisa lesona, miezaha mafy hanarina izay tsy mety, dia ho lasa olona tsara kokoa ianao.”​—Dami.
“Aza atao mahakivy izay fahadisoana nataonao. Makà fotsiny fianarana amin’ilay izy amin’izay ianao tsy mamerina intsony, kanefa aza manamelo-tena be eo foana. Ekeo hoe efa vita iny, dia tohizo ny fiainanao.”​—Zipporah.
Mora Aminao ve ny Miaiky hoe Diso?
Manaiky Hahitsy ve Ianao?
Mahasosotra indraindray ny torohevitra na fanitsiana. Nahoana anefa izany no mahasoa?
Hizara Hizara Ahoana no Hataoko Rehefa Izaho no Diso?
ijwyp no. 29